Casharrada fiidiyowga: Talooyin lagu siinayo tayada sawirka sawir qaadista ah ee Photoshop | Abuurista khadka tooska ah
Tabobar fiidiyow ah: Talooyin lagu siinayo tayada sawirka sawirka ee Photoshop
Markii aan tafatirkaeyno sawiradeena oo aan siineyno xirfad iyo hawo cufan sawiradeena, waxaan isticmaali karnaa qalab taxane ah oo ay na siiso Adobe Photoshop natiijooyin aan caadi ahayn. Markaad ka shaqeyneyso sawir sawir gacmeed ama eedeymo nafsi ah iyo shucuur gaar ah, soosaarka kadib ama habka sawir qaadista ayaa ficil ahaan muhiim ah.
Fiidiyowga maanta waxaan arki doonnaa sida aan u adeegsan karno wax ka beddelka iyo saameynta si aan u helno natiijo tayo sare leh. Waxaan saameyn ku yeelan doonaa saddex meelood oo gaar ah, Joog si aad u aragto!
Daweynta maqaarka ayaa ah mid aad waxtar u leh tanna waxaan u adeegsaneynaa farsamo aad ugu eg tii aan ku isticmaalnay jimicsikeenna Jill Greenberg Effect. Waxaan u isticmaali doonaa qalabka soo bandhigid iyo daaweyn la’aan oo waxaan ku dari doonnaa mug weyn iyo ka duwanaanta astaamaheena. Waxa ay ku saabsan tahay waa in loo isticmaalo si qunyar-socod ah oo aan gubin sawirka oo had iyo jeer laga faa'iideysto ciyaarta iftiinka iyo muuqaalka wajiga ee aad ku dhex leedahay halabuurkeenna.
Cunsurka soo socda ee qeexaya oo aan ku arki doonno fiidiyowgan, waa kaas muuqaalka. Waxaan u adeegsan karnaa farsamooyin kala duwan si aan uga shaqeyno indhaha. Waxa aan had iyo jeer isku dayi doonno inaan helno waa iftiin weyn iyo dadnimo ka weyn dabeecaddaas oo na eegaysa. Waxaan sidoo kale wax ka beddeli karnaa midabbada midabka waxaanna abuuri karnaa muuqaal qurux badan.
Ugu dambeyntiina waxaan arki doonaa sida aan u adeegsan karno lakabka, kala-duwanaanta iyo maaskaro iftiinka. The midabyo dhereg hooseeya badiyaa waa kuwo aad u qurux badan, qabow iyo soo jiidasho leh.
Miyaad ku dartaa wax saameyn ah sawirradaada? Ma ii sheegi kartaa
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Tabobar fiidiyow ah: Talooyin lagu siinayo tayada sawirka sawirka ee Photoshop
Ka-qaadista sawir qaadista: Sirta montage
Sumeynta Shakhsiyeed: U kobci sumcad ahaan, guuleysta macaamiisha